Buy 4-DHEA powder (571-44-8) hplc≥98% | AOHra prohormone
/ Products / Prohormone / 4-DHEA (571-44-8)
SKU: 571-44-8. Sokajy: Prohormone
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaizana sy ny vokatra azo avy amin'ny gram amin'ny filaharan'ny 4-DHEA (571-44-8), eo ambany fifehezan'ny CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Raha te hampitombo ny tanjaka sy ny fahasalaman'ny hozatra, ny prohormones toy ny 4-DHEA vovoka dia fomba iray hahazoana tombony amin'ny fahatsaran'ny tsara sy ny hozatra. Ny 4-DHEA dia ohatry ny prohormonina izay mampiroborobo ny fihazonana, ny hery ary ny habetsahan'ny rà mandriaka mankany amin'ny hozatra. Ny fampidirana 4-DHEA amin'ny programa fanofanana matanjaka sy fanofanana amin'ny vatanao dia manana vokatra mahavariana miaraka amin'ny voka-dratsiny kokoa.
4-DHEA video vovo
4-DHEA vovoka ireo karazana fototra
Name: 4-DHEA vovoka
Meny fitetezana 288.42
Famaritana an-tsoratra: 4-DHEA vovoka
Anarana hafa: 4-Dehydroepiandrosterone, 4-DHEA vovoka, 571-44-8
Ny 5-DHEA dia ohatry ny prohormon izay mitaona ny asa atao amin'ny androgenic ary mety hamerina ny dHEA ao amin'ny vatana. Mijanona ho mavitrika izy mandra-pahatongan'ny dingana atao amin'ny fotoana mety. Ny hosea DHEA izay novokarin'ny lohalika adrenalina, fa ny atidoha ihany no mahatonga izany. Ny DHEA dia mamela ny famokarana androgenes sy estrogen, izay tombontsoa iray tian'ny ankamaroan'ny olona te hampitombo ny haben'ny ratra sy ny fahasalamana hozatra. Amin'ny maha-vatana azy dia mihena ny famokarana DHEA ao amin'ny vatana. Ny fihenan'ny DHEA ao amin'ny vatana dia mitarika aretina hormona, fihenan'ny fiasan'ny firaisana ary ny osteoporose.
Ny poeta 4-DHEA dia ohatry ny prohormone izay mitovy amin'ny DHEA voajanahary ao amin'ny vatana. Ny tombony amin'ny famenoana ny vovony 4-DHEA amin'ny fahasalamana sy ny tanjaka ara-bolanao dia be dia be.
Ny voka-dratsiny ambany amin'ny estrogenic izay matetika mifandray amin'ny steroid anabolic. Ny volo eo amin'ny etrôgônika dia mampiakatra ny lanjany amin'ny tarehy, ny tratran'ny lehilahy, ny tavy kely kokoa amin'ny vehivavy, ny volo amin'ny vehivavy, ny fitsapana kely amin'ny lehilahy ary ny fahaketrahana. Ny poeta 4-DHEA dia tsy misy fiantraikany mitovy. Ny vokatry ny egônesia dia mihaino, ka izany no vokatry ny estrogen.
Ny tombotsoa lehibe amin'ny fitazonana ny fitehirizana ny azota amin'ny tazomoka
Mihabetsaka ny fitehirizana kalorie voakasik'izany ho an'ny tebiteby lehibe indrindra
Fampandrosoana ny fiarovana ny hery fiarovana
Mitovy amin'ny hozatry ny hozatra amin'ny vokatra tsy mitongilana
Pro Précédent Anabolic
Mihabetsaka ny herisetra ao amin'ny gym
Mampitombo ny lanjan'ny moka
Tsy ny toaka poizina
Ny vovony 4-DHEA dia mila mandanjalanja ny fampiroboroboana ny ratra lalina, fa tsy mampihena azy. Miresaha amin'ny matihanina momba ny fahasalamana mikasika ny fomba ahafahana manampy azy manokana. Tena ilaina ny mampiditra ny vovony 4-DHEA miaraka amin'ny fanohanan'ny tsikera sy fitsaboana fitsaboana. Mora kokoa koa ny mitondra ny vovobony 4-DHEA amin'ny endrika pilina mba hampihenana ny fepetra takiana sy ny dosage. Ny vovonan'ny 4-DHEA dia rakotra am-bava izay mifantoka be loatra ary azo tsaboina amin'ny vatana kokoa amin'ny fampiasana kaposilintsika Liposomal.
Inona ny dosage amin'ny vovony 4-DHEA
Ny 4-Androsterone dia mpandidy anabolic, mahery vaika izay miova amin'ny testosterone amin'ny alàlan'ny fanodinana roa tonta amin'ny fanodinana. Izy io dia prohormone tsy manilika, izay midika fa misy fiantraikany kely na adin-tsaina eo amin'ny aty sy ny taovan'ny mpampiasa izany.
6-Andro dia miasa tsara toy ny mpanamboatra na ampiasaina amin'ny prohormones hafa ho an'ny fambolena. Ao amin'ny 700 ka hatramin'ny 1,000 mg, dia azonao ny vokatra mahagaga indrindra raha ampiasaina amin'ny tsingerim-pivoarana iray. Amin'ny ampahany amin'ny pila, ny dosie mamy 4-Andro dia eo anelanelan'ny 300 ka hatramin'ny 500 mg.
Ho an'ny mpandidy: mihazakazaha 4-Androsterone ho an'ny 4 hatramin'ny herinandro 6 ao amin'ny 300-500 mg.
Ho an'ireo mpampiasa veteran: mihazakazaha 4-Androsterone ho an'ny 6 hatramin'ny herinandro 8 amin'ny 300-750 mg.
Ny fomba fiasa 4-DHEA dia miasa
Prohormones dia vahaolana azo vidiana ho an'ny vokatra hormonina fara-tampony. Ny Prohormones dia vovoka izay nalaina am-bava. Ny Prohormone dia midika fa ny fihetsika tafiditra dia dingana ho an'ny hormone. Amin'ny tenany ihany, tsy mahomby izy ireo. Ny asany dia ny mivezivezy amin'ny rà mandriaka. Raha vao niova ho hormon iray ny prohormonina, dia manara-maso ny haavon'ny hormonina. Eritrereto ny prohormone ho proteinina izay miova amin'ny proteinina hanatsarana ny fahombiazan'ny atleta sy ny fahasalaman'ny ratra. Ny poon 4-DHEA dia ohatry ny prohormone.
Rehefa tapitra ny andro, 4-Andro dia miditra ao amin'ny rà ary mihodina ho testosterone. Ny fitambaran-javatra dia hanomboka hanana fihetsika anabolika miavaka, ka mitombo ny habetsahana sy ny fitomboan'ny hery rehefa manatsara ny fiarahan'ny lahy sy ny vavy - manome anao izany "Alpha Male Ecstasy" tsy mampino.
Ny 4-Androsterone dia mikendry ny fampiroboroboana ny tohin'ny tebiteby, manodidina ny 8-12 pounds ny levenan'ny voan'ny muscle ao 4 hatramin'ny herinandro 6 amin'ny famoahana ny prohormone. Mariho fa ity vokatra ity dia hiharihary kokoa amin'ny fihinanana sakafo sy ny fanatontosana tsara.
Ankoatra izany, andramo ireto:
Mahery sy tanjaka tsara kokoa
Fotoana fanarenana haingana kokoa
Eny, mila mila fanampiana ianao rehefa mandray 4-Andro satria mety hisy fiantraikany amin'ny tsindry azonao. Tena ilaina koa ny mamporisika ny fitomboan'ny tosidra.
Toy izany koa, fitsaboana post cycle (PCT) dia ampahany manan-danja amin'ny tsingerina satria izy io dia hanampy anao hitazona ny valiny rehefa manampy ny vatanao amin'ny fikarakarana ny fifandanjany hormona tsy tapaka.
Misy voka-tsoa roa tokony ho fantatrao. 4-Andro dia manana fiantraikany mitovy amin'ny 1-Andro.
Ny loza ateraky ny fihenan'ny volo, ny akne, ny fampitomboana ny prostate, ny fatran'ny fitsapana, ny fitomboan'ny taova, ny tsindry mafy, ary ny olana hafa momba ny kansera.
Hihena ny kolokolonao LDL (ratsy) ary hidina ny HDL (tsara). Tsy tsara ho an'ny fonao.
Na izany na tsy izany, dia hitsahatra herinandro vitsivitsy aorian'ilay fiaramanidina ny vokatra hafa. Noho izany dia tsy maharitra izy ireo.
Ataovy ny asanao mialoha ny fandehan-dra, aorian'izay, ary mandritra ny dianao. Manana fanafody fitsaboana amin'ny tanana ihany koa.
Azonao atao ny mampihena ny voka-dratsiny amin'ny alalan'ny famaritana tsotra izao ny halavam-pandehanao ary / na ny fampihenana ny dosage.
4-DHEA vovoka Marketing
Ny fitaovam-pandehan'ny 4-DHEA dia misy fiantraikany hafa
4-Andro dia kely tsy misy fiantraikany. Mety hiaina fiovan'ny estrogen kely ianao, tsiranoka amin'ny hozatra, tosidra ambony, herisetra ary amin'ny tranga sasany gynecomastia (gyno).
Ny fanakanana estrogen dia ilaina mba hampihenana ny fiovan'ny estrogen ary hisorohana ny gyno ary koa ny fiantraikan'ny angovo hafa mifindra amin'ny estrogen. Ireo vokatra ireo dia mety ho simba na ho tanteraka tanteraka amin'ny fanamafisana ny fikojakojana.
Ahoana no hividianana vovony 4-DHEA avy any AASraw
4-DHEA voly Recipes: